Guqula i-Outlook 2003 Unicode PST Ifayile ibe yiFomathi endala ye-ANSI-Isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Guqula i-Outlook 2003-2010 Unicode PST Ifayile ibe yiFomathi endala ye-ANSI
Guqula i-Outlook 2003-2010 Unicode PST Ifayile ibe yiFomathi endala ye-ANSI
Qaphela: Kuya kufuneka ufake i-Outlook ukuze usebenzise esi sikhokelo.
Ukusukela nge-Outlook 2003, kufakwa ifomathi entsha ye-PST enezibonelelo ezininzi kunale yakudala. Ifomathi entsha ikwabizwa ngokuba yifomathi ye-Unicode ngesiqhelo, ngelixa ifomathi endala ibizwa ngokuba yifomathi ye-ANSI ngokufanelekileyo. Omabini la magama aya kusetyenziswa kwesi sikhokelo.
Nangona ifomathi entsha ingcono ngakumbi kunaleyo indala, ngamanye amaxesha (mostly ngezizathu zokuhambelana) usafuna ukuguqula ifayile yePST kwifomathi entsha ye-Unicode kwifomathi yakudala ye-ANSI. Umzekelo, ufuna ukuhambisa idatha ye-PST kwikhompyuter ene-Outlook 2003-2010 iye kwenye ene-Outlook 97-2002 kuphela efakiweyo.
IMicrosoft ayivelisanga isixhobo esinokwenza olo tshintsho. Kodwa ungakhathazeki. DataNumen Outlook Repair inokukunceda kulo mbandela.
Phawula: Ngaphambi kokuguqula ifayile entsha ye-Unicode PST nge DataNumen Outlook RepairNceda uvale iMicrosoft Outlook kunye nezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile yePST.
Khetha ifayile entsha ye-Unicode PST njengomthombo wePST oza kulungiswa:
Njengoko ifayile ye-PST ikwifomathi entsha ye-Outlook 2003-2010, nceda ucacise ifomathi yefayile yayo kwi "Outlook 2003-2010" kwibhokisi ye combo ecaleni kwebhokisi yokuhlela ifayile. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Repair izakuskena ifayile yePST ukuba imisele ifomati yayo ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, oku kuya kuthatha ixesha elongezelelweyo kwaye akuyomfuneko.
Njengoko sifuna ukuguqula ifayile ye-Unicode PST kwifomathi ye-ANSI, kufuneka sikhethe ifomathi yefayile ye-PST eguqulweyo ibe ngu "Outlook 97-2002" kwibhokisi ye combo ecaleni kwebhokisi yokuhlela yefayile eguqulweyo. Ukuba useta ifomathi ku- "Outlook 2003-2010" okanye "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Repair isilela ukuqhubekeka kunye nokuguqula ifayile yakho ye-Unicode PST.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Outlook Repair Ndiza starUkuskena nokuguqula ifayile ye-Unicode PST. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo, ukuba ifayile ye-Unicode PST ingaguqulelwa kwifayile entsha ye-ANSI PST ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo ngolu hlobo:
Ngoku ifayile entsha ye-PST eguqulweyo ikwifomathi ye-ANSI, enokuvulwa yiMicrosoft Outlook 97-2002.